Dhoolatuska Siyaasadeed & muranka Guddiga doorashada 20/21! - Axadle | Wararka Africa
Magaalada Muqdisho waxa ay martigelineysaa dhoolatus Siyaasadeed oo ay murqadooda ku tijaabinayaan musharixiinta daneyneysa doorashada 20/21, kadib kulamo kala duwan oo dalka dibaddiisa kusoo qaateen.
Qaar kamid ah Siyaasyiinta musharixiinta ah ayaa maalmihii lasoo dhaafay kusoo qul-qulayay Muqdisho, qaar ayaa shalay yimid, halka maanta & maalmaha soo socda ay kusoo wajahan yihiin Caasimadda shaqsiyaad kale.
Musharixiintu, Inkasta oo ay dhaliilsan yihiin xubnaha Guddiga Doorashada 20/21, isla markaana ay sheeegeen in lagu soo daray Shaqsiyaad katirsan Nabadsugidda iyo madaxtooyada, balse ma joojin is muujintooda.
Xildhibaanno katirsan Golaha Shacabka, Senataro & shaqsiyaad kale oo xildoon ah ayaan dhankooda ka marneen Guuxa siyaasadeed ee difaacista & dhaliilista Guddiga Doorashada 20/21.
Baraha Bulshada waxaa aad loo hadal hayaa oo loo wareynayaa sawirrada & boorarka xayaysiiska u ah shaqsiyaadka, waana qayb kamid ah loolanka siyaasadda ee soo ifbaxa waqtiyada doorashada.
Abaabulka ugu weyn waxa uu ka socdaa degmooyinka Gobolka Banaadir, shaqsiyaad dhalinyaro u badan ayaa soo bannaan-bixiya dadka loo dhiibo sawirrada hadba mas’uuliyiinkii markaas lasoo dhaweynayo.
Dhanka Dowladda Federaalka Kama marna dhoolatuska siyaasadeed, mas’uuliyiinta lagu martiqaado xafladaha ayaa ka jeediya hadallada ay u arkaan in ay ka tarjumayaan fariintooda Doorashada 20/21.
Waa waqtiga dhaqaalaha ugu badan lagu bixiyo soo bannaan-bixinta aragtida siyaasadeed eek u dhisan hamiga doorashada, sidoo kale, waa xiliga ugu badan ee la maqlo dhaliisha shaqsiyaadka Dowladda ku jira & xubnaha kasoo horjeeda ay isu jeediyaan.
Beesha Caalamka dhankeeda dhoolatuska Siyaasadeed kama marna oo si joogta ah ayay usoo saartaa warqado la xiriira welwelka haya, ka digista isku dhac siyaasadeed, ku tagrifal awoodeed & waxyaabo kale si uusan u dhuman doorkeeda.
Haddaba, Doorashada 20/21, maxay uga duwan tahay Doorashooyinkii dalka ka dhacay 2016-kii & 2012-kii?